ရေခဲပြင်ထဲမှာပွင့်တဲ့ပန်း _ ခွန်မြလှိုင်: ဘ⁠ဘရန် tag လာပါသော အိမ်ထောင်ရေး
ဘ⁠ဘရန် tag လာပါသော အိမ်ထောင်ရေး
ဘလော့ဂါ ဘိုးအေကြီး ဘ⁠ဘရန် ခေါ် ကိုရန်အောင်က လူပျိုကြီးဘ၀မှ ကျွတ်သင့်မကျွတ်သင့် စဉ်းစားရန် အိမ်ထောင်သည် ဘလော့ဂါ မှ အိမ်ထောင်ရေး အထွေထွေတို့ အကြောင်း မျှဝေပါရန် တဂ်ပါ၏။ ဒါကြောင့် ကျွန်မ ခွန်မြလှိုင်သည် မိမိ တဦးတယောက်တည်း၏ အမြင် ကြောင့် လူပျိုကြီး ကိုရန်အောင် အိမ်ထောင်ရေး အပေါ် နားလည်မှု လွဲမှားမည်ကို စိုးရိမ်ပါသဖြင့် ဒီပို့စ် ဖတ်မိသူ ဦး⁠ဦး ဒေါ်ဒေါ် ကိုကို မမ အိမ်ထောင်သည် အပေါင်းက ကောမန့် ရေးခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း ဘလော့ဂါ ဦး⁠ဦးဒေါ်ဒေါ် ကိုကို မမတို့အား post အဖြစ် ရေးရန် ထပ်ဆင့် တဂ် ခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း ကိုရန်အောင်ကို မစ လိုက်ရပါသည်။ (ဟိဟိ)
အိမ်ထောင်မှု ဘုရားတည် ဆေးမင်ရည် စုတ်ထိုး သည်သုံးမျိုး ချက်မပိုင်လျှင် နောင်ပြင်ရန် ခက်လိမ့် အမျိုး ဆိုတဲ့ အတိုင်း အိမ်ထောင် ရေး ကို ပေါ့ပေါ့တန်တန် သဘောမထားဖို့ ရှေးစာဆိုတို့ စာချိုးခဲ့၏ ထို့ကြောင့် တချို့ တချို့သော သူတွေက သာမန် အသေး အဖွဲက အစ အကျယ်ချဲ့ ဇာချဲ့ ဂုဏ်ဖက် ပကာသန စွက်ပြီး လိုရာဆွဲ အလွဲသုံးစား လုပ်ကြသောကြောင့် မပေါ့တန်ငြား အင်မတန် လေးပင်သွား လေ သည်။ ထို့ကြောင့် အိမ်ထောင်ရေး ဟူသည် အရှင်လတ်လတ် အိမ်ထဲတွင် ထောင်ချခြင်း ဆိုတဲ့ သဘောသက်ရောက် သွားသည်က မြန်မာ့ အိမ်ထောင်ရေးမှာ အတော်များများ တွေ့ရ၏။ သူ့စည်းကိုယ့်စည်း သေချာ နားမလည်ဘဲ အိမ်ထောင်ရေး စည်းဟု တွင်တွင် အော် ကာ တသီး ပုဂ္ဂလ စည်းများကို မေ့ချင်ယောင် နားမလည်ချင်ယောင် ဆောင်ရင်း အိမ်ထောင်ကျလိုက်သည်နှင့် အိမ်ထောင်ဖက် များ တယောက်ကို တယောက် အရှင်လတ်လတ် ငွေဝယ်ကျွန် ပိုင်သလို သဘောထား ကုန်ကြသောအခါ အိမ်ထောင်ရေးများ အဆင် မပြေ ဖြစ်ကြ၏။ အိမ်ထောင် တခု အတွင်း တာဝန်ခွဲဝေမှု အပိုင်းတွင် တဖက်စောင်းနင်း အဖြစ်များက အပြင်လူ မသိ၊ လူရှေ့ ချစ်ပြ၊ ငိုပြ တတ်သူများက နာမည်ကောင်း ရကြ၏။ တကယ်ချစ်သူ ခံစတမ်း၊ ညံ့သူ ခံစတမ်း ဟု ထောပနာ ပြုသူများကလဲ ရှိသေး၏။
တော်တော် စိတ်ပျက်မိသော မြန်မာ့ ရိုးရာ တခုမှာ အိမ်ထောင်ရေးဟူသည် တမိသားနဲ့ တမိသားချည့် ပေါင်းစည်းတာ မဟုတ်။ သူ့ အသိုင်း အ၀ိုင်းနဲ့ ကိုယ့်အသိုင်းအ၀ိုင်း သူ့လူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ကိုယ့်လူ့အဖွဲ့အစည်း ပေါင်းစည်းတာ ဟူသတ⁠တ်။ သာမန် လူသားချင်း ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကျယ်ပြန့်မှု ရှုထောင့်မှသာ ကြည့်လျှင် ကောင်းသလိုလို ဟုတ်သလိုလို။ သို့သော်... ထိုထို အသိုင်းအ၀ိုင်း များသည် သူ့စည်းနဲ့ သူမနေ သူများ အိမ်ထောင်ရေးကို အကြံပေးသလိုလို စေတနာ ထားသလိုလိုနဲ့ မသိမသာ တမျိုး သိသိသာသာ တမျိုး ၀င်စွက် ကြလေသော အခါ... အရွယ်ရောက်လို့မှ ကိုယ့်အိုး ကိုယ့်အိမ် ထူထောင်နိုင်လို့ အိမ်ထောင်ပြု ပါပြီ ဆိုကာမှ စိတ်မချ သလိုလို ၀င်ထိန်းသလိုလို ၀င်စွက်ကြသူ များကြောင့် အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေသည်က အများသား... (လင်မယား မသင့်တင့်လို့ ကြားဝင် ဖျန်ဖြေ စေ့စပ်ခြင်း များသည် တကယ်တော့ သေချာ အသုံးမ၀င်လှ။ များသောအားဖြင့် ကိုယ့်ဘက်က မှန်သည် ထင်တာက များသောကြောင့်)
မယားနေစ ကြောင်သေမှ၊ လင်နေစ ဆင်သေမှ ဆိုတဲ့ စကားတွေနဲ့ တယောက်ကို တယောက် အနိုင်ကျင့်ဖို့ အပိုင်ကြံ ကြသူများ၊ မရခင် ဖျာလိုလိပ် ထိပ်ပေါ်တင်၊ ရပြီးမှ မိသားစု ပြိုကွဲမှာ ငဲ့ညှာ စိုးရိမ်သူ၊ တခုလပ် နာမည်ကို အဆိုးမြင် ကြောက်တတ်သူ မကောင်းမြင်သူ များခြင်းအပေါ် အခွင့် ကောင်း ယူကာ ဖျာလို ချနင်း ဖိနှိပ် သူများလဲ ပေါ၏။ နာမည်ကောင်းကို မက်မောသူများ သည်ဗျူဟာကြောင့် စိတ်ဓာတ်ရေးရာ အကြီး အကျယ် ကျဆုံး၏။ ဂုဏ်အတွက်ဟု ဆိုကာ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံ စည်းကမ်း အယောင်ဆောင် ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ် လိုရာဆွဲ ပုံသွင်းခြင်း များကိုလဲ အနှီ အိမ်ထောင်ရေးများတွင် များများကြီး တွေ့ရတ⁠တ်၏။ ထို ဆိုးကွက် များကို မြင်ကာ လွတ်လပ်မှုကို ကြိုက်သူများက အိမ်ထောင်ရေးကို ရွံ့မုန်းကြ၏။ တချို့ တချို့သော သူများက သူများလူမှာ သည်လိုဖြစ်သော်လည်း ငါ့လူကတော့ ဟိုလိုမို့ တမျိုး တဘာသာ ထင်မှတ်ပြီး အထီးကျန်မှုကို ကုစားရန် အလို့ငှာ အိမ်ထောင်ပြု တ⁠တ်ကြသေးသည်။ (ဘ⁠ဘရန် ကြောက်အောင် ဖြဲခြောက်ခြင်း မဟုတ်။ ကိုယ်တိုင် မြင်ဖူး ကြုံဖူးသော တကယ့်ဖြစ်ရပ်များသာ)
အိမ်ထောင်ရေး ဆိုရင် ယောက်ျားလေး ဘက်ကရော မိန်းကလေး ဘက်ကပါ ၂ဦးပေါင်း တအိမ်ထောင် ၂ယောက်ပေါင်း တဘ၀မို့ တယောက်တည်းရဲ့ ခံယူချက် နားလည်မှု ထည့်ဝင်မှုနဲ့ မလုံလောက် ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ပြင်ပ က တိုက်ခတ်လာမယ့် လောကဓံ လေလှိုင်းတွေ စွပ်စွဲ ပုတ်ခတ် မှုတွေကို ကြံ့ကြံ့ခံပြီး အချင်း ချင်း အပြန်အလှန် ဖေးမ ကူညီ ရင်ဆိုင်ရဦးမှာပါ။ အိမ်ထောင်ရေးမှာ လင်ရော မယားပါ စိတ်ရင်းမှန် ပွင့်လင်းပြီး ဒိုးတူ ဘောင်ဖက် ရင်ဆိုင်ကြမယ် ဆိုရင် လောကဓံ ဘ၀တိုက်ပွဲကို မျက်စိ လေးလုံး နားလေးဘက် နဲ့ မြင်ကြား သမျှ တွေကို ခေါင်း၂လုံးနဲ့ တိုင်ပင် ဖြေရှင်းရာ ရောက်တာမို့ အိမ်ထောင်သည် ဘ၀ဟာ တကိုယ်တည်း ဘ၀ ထက် သာတာ အမှန်ပါ။ အဲလိုမှ မဟုတ်ဘဲ တယောက် ယောက်က တဖက်သတ် အနိုင် လိုချင်စိတ် ရှိသူ တကိုယ် ကောင်းဆန်သူ ဆိုရင်တော့ မြွေပွေး ခါးပိုက်ပိုက်၊ ရန်သူ ကျောပိုး ဘ၀ဆိုးလိုက်မယ့် ဖြစ်ချင်း။
ဘ၀တိုက်ပွဲမှာ နဂိုကမှ ရုန်းကန် ရလို့ ပင်ပန်းရတဲ့ အထဲ လင်မယား အချင်းချင်း သွေးမစည်းဘဲ လူရှေ့ ချစ်ပြ အိမ်မှာ အနိုင်ကျင့်ရင်း လိုဘ မဖြည့် ပေးရင် ဖြစ်စေချင်တာ လုပ်မပေးရင် ကိုယ်ပုံသွင်း သလို မနာခံရင် ကိုယ့် အိမ်ထောင်ဖက် ကို နာမည်ဖျက် အပုပ်ချရင်း ကျွန်တော် ကျွန်မ ကတော့ ချစ်လိုက် ရတာ သူကတော့ ဒီလို.. ဆိုပြီး ငိုပြတတ် ပေမယ့် ကွဲမပေး သူတွေကြောင့် အိမ်ထောင်ရေးကို စိတ်အနာကြီး နာပြီး အိမ်ကို မပြန်ချင် လေလွင့် သွားတဲ့ ယောက်ျား တွေရော မိန်းမ တွေပါ ရှိခဲ့ဖူး ရှိနေဆဲပါ။ သူတို့ရဲ့အတွေးအခေါ်တွေ ကိုလဲအံ့သြ မိပါတယ်။ အဲဒီလို လုပ်တော့ ကိုယ့်ပေါင် ကိုယ်လှန်ထောင်း ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက် နာမည်ပျက်တော့ ကိုယ်ပါ ရော အထိ မနာဘူးလား။ ရေမြင့်မှ ကြာတင့် တာပါ။ ဘာလို့ အဲလောက် တကိုယ်ကောင်း ဆန် အတွေးတိမ် အသိတရား နည်းသလဲ မတွေးတတ် အောင်ပါပဲ။
သာယာ ပျော်ရွှင်စရာ အိမ်ထောင်ရေး ဖြစ်ဖို့ ဆိုရင် အိမ်ထောင်ရေး စည်းသာမက အိမ်ထောင်ဖက်ချင်း တ ယောက်အပေါ် တယောက် ထားတဲ့စည်းပါ ရှိဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီလိုပြောလာရင် အမယ်လေး လင်မယား အချင်း ချင်း စည်းထား နေရအောင် ဘာ မဟုတ်တာ ခိုးလုပ်ဖို့ လဲ စသဖြင့် အဆိုးဘက်က မြင်တတ် ကြပါသေး။ အခု ရှုပ်မှ နောင်ရှင်း ဆိုသလို ထားကို ထားသင့်တဲ့ စည်းတွေ ကတော့ ၀ိသာခါကို သူ့အဖေ ဓနဉ္ဇယ သူဌေးကြီးက မှာလိုက်တဲ့ စည်းကမ်းချက် ၈ချက်က နမူနာ ပါပဲ။ ခေတ်နဲ့ အညီ ထပ်ဖြည့် နိုင် ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ အညီ လျှော့ နိုင်ပေမယ့် ခုထိတော့ ခေတ်မီနေဆဲ စည်းကမ်းချက် ရှစ်ချက် ကတော့
Posted by ခွန်မြလှိုင် at 5:02 AM
အတွင်းမီးကိုလည်း အပြင်မထုတ်သလို အပြင်မီးကိုလည်း အတွင်းမသယ်ဘူး. (တိတ်တိတ်လေးပဲ ကဲမယ်.) အဟတ်.
ခုလို ဗဟုသုတအများကြီးရအောင် မျှဝေပေးလို့ သိုင်းကျူးဆိုးမတ်ခ်ျဗျာ.
ကျွန်တော့်အတွက် ၈၀ % လောက်ပိုသေချာသွားစေတာပေါ့.
ဘာလဲဆိုတာတော့ မကြာမီမျှော်... ဟတ်ဟတ်.
ရည်းစားထားပြီး အိမ်ထောင်ရေးကို လိုက်မေးတဲ့ အဆင့်ရောက်နေတယ် ဆိုတည်းက ၈၀% ဆိုတာ အိမ်ထောင်ပြုဖို့မှန်း ရိပ်မိပါတယ်ဗျာ... ဟတ်ဟတ် ... အသိတရား သဘောထား ရေချိန်မြင့်ပြီး အချစ်ရေး သက်လုံကောင်းတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးမျိုး ပိုင်ဆိုင်ပါစေဗျာ...